Iifonti eziSimahla zaNgoku eziBanokuphakama kwigama labo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Imithombo
Silandela ukufumana iifonti ezintsha zasimahla ezisisebenzelayo ukubeka olona chukumiso lukhethekileyo kwiwebhusayithi yethu, eCommerce okanye kwibhlog, kwaye ke sikwazi ukubalasela kwabanye okanye, ubuncinci, sitsala umdla wotyelelo oluwe kwiinjini yokukhangela zikaGoogle xa usebenzisa igama eliphambili.
Siza kuqokelela Iifonti zasimahla ezingama-31 eziza kuphela kubaqulunqi bazo zonke iintlobo. Uthotho lweefonti ezikumgangatho ophezulu ezikulungeleyo oko kubizwa ngokuba simahla kwaye oko kusivumela ukuba sigqamise umsebenzi wethu wewebhu. Masifikelele kuyo kunye neefonti zasimahla ezingama-31.
1 Iskripthi se-Emiral
3 Waffle Waffle
9 Uninzi lweCowboys
11 Izidalwa zasendle
12 Ubugcisa obulandelayo
13 I-AtF Spark
16 UZilla slab
17 I-Ginora Sans
20 Ixesha elililo
30 Ihotele eNkulu
Umthombo wokuzisebenzisa, kwilayisensi ekufuneka uyenzile ebhokisini, kwaye luphawulwa ngezo milo zigoso ngesitayile esenziwe ngesandla esibetha kakhulu kwiimveliso.
Olu hlobo lochwethezo ilayisenisi evulekileyo yefonti, Ungayisebenzisela nantoni na oyifunayo. Yenziwe nguMike Abbink kunye noBold ngoMvulo wesazisi esitsha se-IBM kwi2017.
Omnye umthombo osetyenziselwa ukurhweba simahla kwaye unonxibelelwano olukhethekileyo nayo yonke into inokwenza nekhekhe nekhitshi. Inemithombo emibini.
A kakhulu ifonti entle ukuba simahla kwintengiso nakusetyenziso lobuqu kwiinguqulelo zesiqhelo nezimnyama.
Enye ifonti yasimahla yokusetyenziselwa urhwebo ime ngokucacileyo kolu luhlu yeefonti ezingama-31.
Sishiywe ngumnqweno wokungakwazi ukufikelela kusetyenziso lwasimahla lwentengiso lwe- ngokuchwetheza kancinci kwaye yahlukile kwezinye.
Ifonti yosetyenziso lomntu ineempawu zeNordic. Ukukhangela ngaphandle kwamathandabuzo ngeempawu zayo kunye nokwahlulwa phakathi kwabanye.
Ifonti yasimahla yokusebenzisa umntu eyenza ikhonkco elikhethekileyo kunye nesihloko ngasinye sebhlog okanye iwebhu leyo inento yokwenza nendalo.
Omnye ifonti yokubambisa iso kusetyenziso lwentengiso kwaye ubuqu ukuba ukususela kumzuzu wokuqala kusikhokelela kwinto ethile yaseMelika.
Omnye ifonti yoyilo ngokupheleleyo ukuzisebenzisa ngokwakho okuqhayisa ngokuba 'yi-art deco'.
Ukwahluka kwe-3 kwifonti yasimahla ukuzisebenzisela ukufuna icala lasendle kunye nolonwabo kwindawo echwetheziweyo.
Uhlobo lohlobo oluhle kunye uninzi lwezakhono zobugcisa oko kushiya kungekho mntu ungakhathaliyo. Ewe ungayisebenzisa ngento yentengiso, ke qhubeka.
Umbhali ubanga ukuba le ifonti yasimahla yentsingiselo, oko kuthetha ukuba Guqula amanani abe ngumbono wedatha.
Umthombo okhokelela ubuhle njengephasiwedi. Icala elisezantsi kuphela kukuba kuya kufuneka ulisebenzisele into eyimfihlo.
Uhlobo lwe-sans serif lwe- ukusetyenziswa kwentengiso kwiifonti zikaGoogle. Inesibindi sokuphatha iiyantlukwano ezisixhenxe kunye nam ukuze uzisebenzise kuwo nawuphi na umsebenzi.
Lo Umthombo ngowona uphambili weMozilla, ukuba kunyaka ophelileyo utshintshe ilogo yayo, Kwaye isetyenziselwa unxibelelwano oluphambili olunikezelwa ziinkonzo zalo ezifana nebhlog yakho okanye isikhangeli sewebhu.
NjengeMozilla, omnye umthombo isimahla ukuba isetyenziselwe urhwebo enokwahluka okwaneleyo ukuze ezinye zanele iimfuno zakho.
Umthombo kakhulu eBritish kunye neAnglo-Saxon enokusetyenziselwa zonke iintlobo zeenjongo. Isimahla kuphela ukuba isetyenziselwe wena.
Ukuchwetheza ukusetyenziswa kwakho ngokungathi sinjalo ukubhala ngesandla ngokwahluka okukhulu.
Iphepha-mvume lokuzisebenzisa lomntu ngumthombo owoyikekayo iqulethe iiyantlukwano ezimbini. Omnye umthombo onxulunyaniswa ngokusondeleyo ne-gastronomy.
Umthombo omtsha onefayile ye- Ixabiso elikhulu lokudibanisa zombini izimvo zejiyometri ithambile ukuba ngomnye wabanombulelo kolu luhlu. Ukusetyenziswa simahla kwentengiso kunye nokusebenzisa.
Ifonti yasimahla yokusebenzisa umntu nge ngokucacileyo motif gastronomic. Ukuba ufuna ukuyisebenzisela urhwebo, kuya kufuneka unxibelelane nombhali.
Intengiso isimahla ukuyisebenzisa, ke unayo Ifonti yeserif ukwenza iintloko ezintle kunye noyilo lwe logo.
Uhlobo lwebrashi yefonti yasimahla yokuthengisa / yokusebenzisa ubuqu. ineenkcukacha ukuba yenzelwe ukufundwa ngokulula ukuya kubukhulu obuphakathi.
Ifonti ekhethekileyo ngaphandle kwamathandabuzo okusetyenziselwa ubuqu.
Ifonti yasimahla yorhwebo / yobuqu enayo umoya ongenankathalo ukubetha kakhulu.
Uhlobo lochwethezo intle kakhulu kwaye encinci minimalist serif kuzo zonke iintlobo zemisebenzi. Enye yezona zinto zibalulekileyo kuluhlu. Ukusetyenziswa simahla komntu kunye nokuthengisa.
Nge ezahlukeneyo ezahlukeneyo, iyakwazi ukugubungela iilwimi ezingama-40 ezisebenzisa oonobumba besiLatin. Kuluqwalasele kwaye yenye yezona zinto zintle kule minyaka mibini idlulileyo.
Umthombo ohlaziyayo wanamhlanje xa sisebenzisa izixhobo eziphathwayo ngalo lonke ixesha. Ukusetyenziswa simahla kwentengiso kunye nokusebenzisa.
Ngokusekwe kwi- isihloko sehloko seCafé Metropole NguTyrone Amandla. Ukubetha kakhulu kwaye simahla ukusetyenziswa komntu kunye nokuthengisa.
Inomlando wembali intle kwaye incinci Oku kuyishiya kwindawo enelungelo phakathi kwabo bonke abakolu luhlu. Ilayisensi yasimahla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti eziSimahla zaNgoku ezingama-31 zaBayili
Oswaldo Montilla sitsho
Enkosi mhlobo olungileyo .. !! Undincede ngenene ngale mithombo, ndiyayixabisa
Phendula uOswaldo Montilla
Wamkelekile Oswaldo! Konke okugqibelele.
Igalelo elifanelekileyo liyaxatyiswa.
Xa typography ibaluleke ngakumbi kwifilimu efana noHan Solo: ibali le-Star Wars
Ukuthwebula iifoto zeChernobyl ezithathwe ngekhamera ye-infrared